वर्कशपको काम, आउँछ दाम
नमस्ते म सरस्वती मगर हुँ । म अहिले मकवानपुर क्याम्पसमा स्नातक तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छु । म अहिले २२ बर्षको भएँ । हेटौंडा–१० कर्रामा मेरो घर छ । परिवारमा आमा, बुबा र दिदी हुनुहुन्छ ।
मैले आफ्नो अध्ययन बाहेक समाजमा पुरुषले मात्रै गर्ने भनिएको काम सिकेको छु । मेसिनको मोटर मर्मत गर्ने, पङ्खाको क्वायल बनाउने…
Added by Bijaya Timalsina on March 31, 2012 at 11:30am — No Comments
बादर पीडित दलकहाँ
बादरको उपद्रोपको कारण दिनहुँ दुःख झेल्नुपरेको भन्दै हेटौंडा–१० भुटनदेवी टोलबासीले समस्या समाधानको लागि राजनीतिक दल गुहारेका छन् । पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि प्रशासनबाट सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले राजनीतिक दलका नेतासमक्ष गुनासो पोखेका हुन् ।
भुटनदेवी टोल विकास संस्थाकी कोषाध्यक्ष भवानी दाहालले आफूहरु बादर पीडित भएको गुनासो गरिन् । ‘बादरलाई रेबिज लागेको छ’, दाहालले सुनाइन्,‘बादरलाई टोक्ने चार कुकुर मरिसके ।’ दाहालसहित टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले शुक्रबार जिल्लाका राजनीतिक दलका…
Added by Bijaya Timalsina on March 31, 2012 at 11:00am — No Comments
ट्विनटावर हानेको दशक दिनको जुम्लाको भिआईपी यात्रा भाग २
भोलिपल्ट बिहान लगाएकै लुगामा उठियो बिहानै....त्यसपछि त्यत्तिकै जुम्ला हानीनु त भएन् भनेर सगुन दिदिलाई सपिंगका लागी नेपालगंज बजार जाऔं भनेर आग्रह गरेँ । बिहान करिब ८ बजेतिर बजार तिन हिनियो । जन्मेर अढाई दशक काटिसकेको मान्छे......फेरि एकपटक पुर्नजन्म भएजस्तो लाग्यो कारण आफ्ना लागी चाहीने सबैचिज एकैपटक किन्नपर्ने । शायद ..म जन्मनेबित्तिकै मेरा बाआमाले दंग पर्दै मेरा लागी भोटो,दौरा,सुरुवाल,गंजी,कट्टु,पाउडर,तेल सबै किनिदिएका थिए होलान् ...त्यसैगरी आज फेरि मेरालागी इतिसबै किन्नपर्ने दिन आएको…
Added by pawan neupane on March 30, 2012 at 12:30pm — No Comments
कैलपाल जाँत एक सम्झना
यसपाली जाँतका लागि भनेर नै मैले पनि दुई पटक पहाड पस्ने मौका पाए । पहिलो जाँत शिखरको जाँत थियो जो भदौका महिनामा सम्पन्न भएको थियो । पछिल्लो जाँत कैलपाल जाँत थियो जो कार्तिकको १५ र १६ गते सम्पन्न भएको थियो । यी दुवै जाँतहरु डडेल्धुरा जिल्लाको कैलपाल माण्डौ गाविसको वडा नं. ५ जयसेरामा भएका थिए । सोही दिन गणेशपुर गाविसको मैलोडामा पनि नङरै लाटाको जाँत भएको थियो । …
Added by Raman Paneru on March 30, 2012 at 11:00am —2Comments
सम्पादक ज्यूको चाला पनि देखियो !
अरुका बारेमा नराम्रो कुराहरु लेख्दा अरुले पनि बारम्बार ‘दुधले धोएको त तै पनि कहाँ होलास् र ?’ भनेर औंला ठड्याउँथे । पहिलो अंकमा मैले करकार्यालयको सामान्य कर्मचारीले पनि कसरी अनुचित रुपमा पदीय लाभ उठाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा लेखेपछि दोस्रो अंकमा मैले आफ्नै शिक्षण पेशाभित्र हुने भ्रष्टाचारहरुका बारेमा लेखेको थिएँ । ती मध्ये कतिपय गलत कामहरु मैले स्वयं पनि गरेको छु । तर सबै दोषहरु भएको एउटै मास्टर साब भेटाउन भने गाह्रो…
Added by Raman Paneru on March 29, 2012 at 10:30am — No Comments
हेलो सर्कार – रेडियो नेपालका कर्मचारीलाई तलव देउ !
गत मंगलबार रातको साढे ९ बजेतिर ट्वीटरमा रेडियो नेपालका कर्मचारीहरुले सयममै तलब नपाएको भन्ने व्यहोराको दीपकजीको माथिको ट्वीटले ध्यान खिच्यो । आफू पनि रेडियोसँग सम्वन्धित भएकोले कुरा के रहेछ थाहा पाउन दिइएको लिंक क्लीक गरे ।
समाचार आफैमा आश्चर्यजनक लाग्यो । कुनै…
Added by Krishna Guragain on March 29, 2012 at 10:30am —2Comments
पछिल्लो समयमा काठमाडौँको वसन्तपुर दरवार परिसरमा वटुवा र चिनेजानेका मान्छेहरूसँग गफ गर्दै र दयावानहरूले दिएका २/४ रुपैयाँ जम्मा पारेर उसिनेको साग खादैँ बस्ने एक वृद्ध आमाका बारेमा अध्ययन गर्न म तीन…
Added by Durga Lamichhane on March 28, 2012 at 5:00pm — 1 Comment
ट्विनटावर हानेको दशक दिनको जुम्लाको भिआईपी यात्रा
कर्णाली अंचलका करिब ३ दर्जन संचारकर्मीहरुलाई संबैधानिक सवालमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने उदेश्यले गएको सेप्टेम्बर ११ तारिखका दिन जुम्ला जाने योजना बनाईयो । जुम्ला,निक्कै सुनेको नाम र जान इच्छा लागेको ठाऊँमध्ये एक .......त्यहीँ माथी पाँच जना अत्यन्तै रमाईला मान्छे । पत्रकारहरुका नेता शिव गाऊँले दाई, संबिधानबिद काशिराज दाहाल सर, यु एन डि पी की रेनु क्षेत्री जी ,इक्वल एक्सेसका उपेन्द्र अर्याल सर र सगुन बस्नेत दिदिका साथमा ..... यात्रा रमाईलो र अविश्मरणिय बन्ने कुरोमा निक्कै विस्वस्त थिएँ…
Added by pawan neupane on March 28, 2012 at 11:00am — 1 Comment
धमाधम भत्किँदै सीमाभित्रका घरहरु
नारायणगढ ,भरतपुर नगरपलिकाले सडकको सीमाभित्र परेका भौतिक संरचना भत्काउन थालेपछि नारायणगढको सडक फराकिलो देखिन थालेको छ ।
नगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा ट्राफिक कार्यालयको सहयोगमा चैत्र १ गतेदेखि सडकको सीमाभित्र परेका भौतिक संरचना हटाउन थालेको हो । १ गते नै केही भौतिक संरचना भत्काएर अभियान थालनी गरेका नगरपालिकाले गत ८ गते पनि केही भौतिक संरचना भत्काएको थियो ।
भरतपुर नगरपालिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको सडकको मध्य भागदेखि…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 27, 2012 at 10:30am —2Comments
Added by Subas Adhikari on March 26, 2012 at 1:30pm — 8 Comments
बिक्री नभएर गोदाममै चामल, खाद्यान्न अभाब घट्यो
बाजुरा, ११ चैत । यो समय चरम खाद्यान्न अभाब हुने समय हो । बिगतका बर्षहरुमा यो समयमा बाजुराको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने ११ गाबिसहरु खाद्यन्न संकट हुने समय बेला हो । तर यो बर्ष भने खाद्यन्न संकट भएको छैन् । चामल बाँड्ने अघिल्लै दिनदेखि निक्कै तनावमा रहने कोल्टिका सुरक्षाकर्मी सहित नेपाल खाद्य संस्थानका कर्मचारीहरु अहिले फुर्सदिला भएका छन् ।
दिनभरी लाईनमा बसेर पनी बेलुकी ५ केजी चामल नपाएर घर फर्कने स्थानीयबासीहरु अहिले चामल किन्न नआएर चामल सडेको कोल्टि खाद्य संस्थानका प्रमुख रमेश बहादुर…
Added by Purna Bahadur Khadka on March 24, 2012 at 5:00pm —2Comments
गैरजिम्मेवारपूर्ण एन्फाको वेभसाईटः पङ्गु बनाउँछ–भिजिटरलाई
राष्ट्रिय फुटवलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटवल संघ (एन्फा)को अफिसियल वेभसाईटले जो कसैलाई उल्लु बनाउँछ । यो लेख तयार पारिरहँदा सम्मको मिति (चैत्र १० गते)मा समेत एन्फाको वेभसाईट खोलेर हेर्ने हो भने माथीको देव्रे कुनोमा नेपाल पुलिस क्लब र मनाङमस्र्याङ्दी क्लबबीचको खेलको ‘लाइभ’ स्कोर भनेर लेखिएको छ । त्यो खेल भने चाँही कुन हो, थाहा छ ? खेल हो–राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिताको बुटवल (माघ ८ गते)मा भएको नेपाल पुलिस र मनाङबीचको अन्तिम खेल । सबैलाई थाहा छ–राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता सकिएको धेरै नै…
Added by Shiva Adhikari on March 23, 2012 at 9:21am — No Comments
ईन्जिनियर सुवास सापकोटाले हिजोआज नक्सा बनाउने कामबाट केही दिनका लागी फुर्सद निकालेका छन् । यतिबेला उनी नेपाल र भारतका रंगकर्मीहरुसंग जीवन र संस्कृतिको बारे बुझदै छन् । उनका लागि फरक क्षेत्र हो रंगमञ्च तर निसंकोच यसमा उनी घुलमिल भएका छन् ।
केही फरक, नयाँ‘ र सिर्जनात्मक कार्य गराँै भन्ने चाहनाले यहाँसम्म आई पुगेको बताउँछन् सुवास । यस्तै नयाँ, फरक र सिर्जनात्मक कार्य गर्न र छिमेकी राष्ट भारतसँग साँस्कृतिक सम्बन्ध जोड्न भारतीय सहित २० यूवा रंगकर्मीहरु पनि तल्लिन छन् ।…
Added by Amuna Chapagain on March 22, 2012 at 5:00pm —7Comments
Added by Kranti Darai on March 22, 2012 at 3:20pm —3Comments
देउता जति जी, देवी जति माता ?
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिवजी तर लक्ष्मी माता, माता पार्वती, सरस्वती माता, हुँदा हुँदा ब्रह्मचारिणी पनि माता । म बुझ्न सकिरहेकी छैन यो सम्बोधनको तात्पर्य के हो ? भलै देउतामा शिवजीलाई भोले बाबा पनि भनिएला तर माता नभनिएका देवी भेट्न सकिनँ ।
देवी अर्थात् नारी, जससँग माता अर्थात् आमा बन्ने सामथ्र्य छ त देवीका नामसँगै माता जोड्दा के आपत्ती ? प्रश्न आउला । तर के देउताहरु चाहीँ नपुंसक हुन् त ? पार्वतीले आफ्नो मयलबाट गणेश पैदा गरिन्, यो अर्थमा महादेवको पुरुषत्वमाथि शंका गर्न सके पनि कुमार त…
Added by Durga Lamichhane on March 22, 2012 at 10:00am —3Comments
रूखलाई अँगालो हाले मन्त्री र सभासद्ले
आहा क्या आनन्द ! रूखलाई माया गरी अँगालो हाल्दाको अनुभव नै बेग्लै हुँदोरहेछ । यस्तै भयो मन्त्री सभासद् तथा केही स्थानीयवासीहरु मंगलपुरको सिद्धी गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनक्षेत्रमा रहेका रूखहरुलाई अङ्गालो मार्दै थिए ।
विश्व वन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 22, 2012 at 6:30am — No Comments
९५ प्रतिशत वनक्षेत्र डढेलो जोखिममा
गर्मीयाममा मकवानपुरका अधिकाँश वनक्षेत्र आगलागी र डढेलोको जोखिममा पर्नेगरेको छ । जिल्लाको कूल वनक्षेत्रमध्ये जम्मा ५ प्रतिशत मात्र डढेलोको कम जोखिम क्षेत्रभित्र पर्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
जिल्लाको ४३ मध्ये जम्मा ६ गाविस डढेलोको कम जोखिम क्षेत्रभित्र पर्नेगरेको छ । जसमध्ये कुलेखानी र…
Added by Shiva Kumar Kashi on March 21, 2012 at 3:00pm — No Comments
रुकुम यात्रा । यात्रा संस्मरण-भाग ३ (अन्तिम भाग)
भोलिपल्ट विहानैदेखि काम थाल्नु थियो । अर्थात पत्रकार सुरक्षाका विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउन पुगेका हामीहरु आफ्नो मिशनमा जुट्नु थियो । भोलिदेखीको काम सफल भएको सुन्दर सपनामा डुल्न पवनजी र म कोठाभित्र जस्तोसुकै पानी वा बाढीको भेल आएपनि सुत्ने अठोटका साथ ओच्छ्यानमा पल्टियौँ र निदाईएछ पनि ।
भोलिपल्ट विहान, सबेरै उठ्ने…
Added by Prakash Lamichhane on March 20, 2012 at 5:00pm —9Comments
सबैलाई अचम्ममा पार्ने मेकानिकल कान्छा
'हैन यति सानो फुच्चेले पनि विद्युतिय उपकरण मर्मत गर्न सक्छ र?' उनलाई देख्ने जो कोही व्यक्ति पनि आश्चर्यमा पर्दछन् र यही प्रश्न गर्छन् । तर बिद्युतिय सामग्रीहरु मर्मत गरेर सबैलाई छक्क पार्ने गरेका छन्, कैलाली पहलमानपुरका १६ वर्षिय सुमन पौडेलले ।
हाल उनी भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा इन् इन्जिनियरिगंको…
Added by Sanju Paudel on March 20, 2012 at 4:00pm —6Comments
Added by Kala Dahal on March 20, 2012 at 10:30am —4Comments